Xog: Axmed Madoobe iyo walaaca Mareexaan ee in Kismaayo lagala wareego…. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAXog: Axmed Madoobe iyo walaaca Mareexaan ee in Kismaayo lagala wareego….
Xog: Axmed Madoobe iyo walaaca Mareexaan ee in Kismaayo lagala wareego….
July 15, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Xog: Axmed Madoobe iyo walaaca Mareexaan ee in Kismaayo lagala wareego….
(Warqaat.Com)- Maamulka Jubbaland ayaa shalay waxa uu garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ka celiyey taliye loo Magacaabay guutada 43-aad ee ka howlgasha deegaanada Jubbaland, oo dowladda Soomaaliya ay soo dirtay.
Taliyaha garoonka laga celiyey oo lagu magacaabo Cali Bogmadow ayaa dhawaan dowladda Soomaaliya ay u magacaawday Guutada 43-aad, waxa uuna beddeli lahaa taliyihii xilkaasi laga qaaday ee Janaraal Ismaaciil Saxardiid.
Jubbaland waxa ay ku dooday in magacaabistan aan lagala tashan, ayada oo qodob ka mid ah dastuurka uu qorayo in taliyayaasha qeybaha ee loo magacaabayo deegaanada maamul goboleedyada la tashi lagala sameeyo madaxda maamulladaas.
Si kastaba, Warqaat Online ayaa ogaatay in Axmed Madoobe uu qabo walaac ka weyn magacaabis taliye, oo aan lagala tashan, uuna ka wel welsan yahay in magaalada Kismaayo loogu yimaado.
Sida aan xogta ku helnay Axmed Madoobe, ayaa aaminsan in ciidamada dowladda ee gobolka Gedo, ay dhowaanahan tiro ahaan iyo cudud ahaanba sii kordhayeen, ayaga oo dowladda ka helaya taageero.
Waxa uu rumeysan yahay in ciidankaas, oo kasoo jeeda beesha Mareexaan ay dib usoo sheegan karaan magaalada Kismaayo, soona weerari karaan. Axmed Madoobe ayaa gacan ku haynta Kismaayo kala wareega Barre Hiiraale oo Mareexaan ah, isaga oo kaashanaya ciidamada Kenya.
Dhowaan ayay ahayd markii uu aad uga carrooday hub dowladda ay u dirtay ciidamadaas, waxaana Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu cabasho ka muujiyey in hubka ay dowladda u dirtay ciidamada jooga Gedo ay u gacan geleen Al-Shabaab.
Inkasta oo aysan jirin wax caddeyn ah oo muujinaya in hubkaas uu Shabaab gacanta u galay, haddana waxay ahayd qodob Axmed Madoobe u adeegsaday sida uu uga walaacsan yahay hubka gacanta u galay ciidamada beesha Mareexaan.
Axmed Madoobe oo ay aad isugu wanaagsanaayeen sanadihii dambe dowladda Xasan Sheekh, ayaa aad loogala tashan jiray dhammaan dhaqdhaqaaqyada deegaanada hoos yimaada maamulkiisa. Si kastaba, dowladda cusub ee madaxweyne Farmaajo ayaa billowday inay si toos ah ula macaamisho dadka reer Gedo, taasina ma farxad gelin Axmed Madoobe.
Dhowaan Axmed Madoobe waxa uu Nairobi kula kulmay siyaasiyiinta beeshiisa ee ku jira dowladda Kenya, isaga oo arrintan ka cabanaya, kana digaya qatarta ah in Kismaayo gacantiisa ka bixi karto. Lama oga waxa ay isku raaceen oo ay arrintan uga hortagi karaan.
Si kastaba, waxaa cad inuu aad u xun yahay xiriirka Axmed Madoobe iyo madaxweyne Farmaajo.
Dowladda Turkiga Oo Si kulul Uga Hada Shay Qaraxyadii Ka Dhacay Meel Ku Dhow Xarunta Madaxtooyadda…
Sheekh caana oo shaaciyey sirta xiriir ee dhaxal suge Bin Salman iyo Yahuudda kadibna la…
682,780 total views, 7,446 views today
682,780 total views, 7,446 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
682,653 total views, 7,445 views today
682,653 total views, 7,445 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
682,684 total views, 7,446 views today
682,684 total views, 7,446 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
682,746 total views, 7,447 views today
682,746 total views, 7,447 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
682,803 total views, 7,445 views today
682,803 total views, 7,445 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]